ရှင်နန္ဒာဘိဓဇ - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှင်နန္ဒာဘိဓဇ (၁၀၈၀ − ၁၁၄၆) သည် ကျမ်းပြု သာသနာပိုင်ဆရာတော် ဖြစ်သည်။
၂ ရရှိခဲ့သော တံဆိပ်တော်များ
၄ ပြုစုခဲ့သည့် ကျမ်းများ
ဆရာတော်ကို ၁၀၈၀ ပြည့်နှစ်တွင် အနောက်တိုက် ပေါက်မြင့်ရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယယ်အမည်မှာ ဦးစံဘလူး ဖြစ်သည်။ ရဟန်းဘွဲ့တော်သည် ရှင်နန္ဒမာလာ ဖြစ်သည်။[မှတ်စု ၁]
ရေမိန်ဆရာတော် အရှင်ကလျာဏဓဇထံတွင် စာပေကျမ်းဂန်များ သင်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် စလင်းမြို့သို့ ကြွတော်မူခဲ့သည်။ ဝိနည်းတော်တစ်စောင် ပြုစုတော်မူခဲ့ရာ ထိုကျမ်းကို ထန်းတပင်ဆရာတော်က စဉ့်ကူးမင်းအား ပြုသခဲ့သည်။ မင်းကြီးသည် ကြည်ညိုသဖြင့် လေးထပ်ဇေတဝန်ရွှေကျောင်းကို “ဘုံကျော်ဝေယန်” ဟု သမုတ်ကာ လှူဒါန်းခဲ့ည်။
ဆရာတော်သည် ဘိုးတော်ဘုရား၏ သားတော်များ ကိုးကွယ်ခြင်းလည်း ခံရကာ အိမ်ရှေ့မင်း မိဖုရားကျောင်းတော်ကို “မင်္ဂလာဝေယန်” ဟု သမုတ်ကာ လှူဒါန်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သာသနာပိုင်အဖြစ်လည်း အပ်နှင်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ဆရာတော်သည် ရဟန်းပျိုဘဝကတည်းက ကျမ်းဂန်များ ပြုစုခဲ့သည်။
ဆရာတော်သည် နရိန္ဒာဘိဓဇမဟာဓမ္မရာဇာဓိရာဇဂုရု၊ နရိန္ဒာဘိသီရိဓဇမဟာဓမ္မရာဇာဓိရာဇဂုရု စသည့် တံဆိပ်တော်များ ကပ်လှူခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
ဆရာတော်သည် ၁၁၄၆ ခုနှစ်တွင် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။
↑ မင်းလှသီရိသီဟသူ၏ မှတ်တမ်း၌ ရှင်နန္ဒာဘိဓဇဟု ရှိသည်။ ပိဋကတ်တော်သမိုင်း၌ကား နရိန္ဒာဘိသီရိသဒ္ဓမ္မဓဇမဟာဓမ္မရာဇာဓိရာဇဂုရုဘွဲ့ရ ဗန့်ကျီတိုက်စီရင်စု ဆုံထားရွာဇာတိဟု ဖော်ပြသည်။ ဘွဲ့တော်ကိုလည်း ရှင်နန္ဒမာလာ ဟု ဖော်ပြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ လှသမိန် (၁၉၆၁ ခုနှစ်). ဂန္ထဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိပေါင်းချုပ်. ၃၅၇၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့: ဟံသာဝတီစာအုပ်တိုက်, ၂၆၊ ၂၇။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှင်နန္ဒာဘိဓဇ&oldid=447930" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။